OnePlus6၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
OnePlus ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစစ်ထုတ်သည်။ ပေါက်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ high-end ဖုန်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
Nexus Player သည် Android P ကိုလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ဟု Google ကအတည်ပြုသည်
Google ကအတည်ပြုလိုက်တာကတော့ Nexus Player ဟာ Android P ကို ​​update မလုပ်ရုံသာမကလုံခြုံရေး update များလက်ခံခြင်းကိုလည်းရပ်တန့်စေလိမ့်မယ်။
လက်တွေ့ကျတဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာမှာ Android Tablet မှာတရားဝင် WhatsApp ကိုဘယ်လိုထည့်သွင်းရမယ်ဆိုတာကိုပြပေးပါလိမ့်မယ်။ ဤအရာအလုံးစုံကို WhatsApp ကို web သို့မဟုတ်မည်သည့်လှည့်ကွက်သို့မဟုတ် mod ကိုအသုံးပြုရန်မလိုဘဲ။
Nubia V18: ဘက်ထရီကြီးမားပြီးအလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်
Nubia V18: အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်တရားဝင်လွှတ်တင်ခြင်း ယခုလနှောင်းပိုင်းတွင်တရုတ်နိုင်ငံ၌စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သောအမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Galaxy S9 နှင့် S9 + တို့သည် ARCore ၏တိုးချဲ့ထားသောအဖြစ်မှန်ကိုအထောက်အပံ့ပေးလိမ့်မည်
Galaxy S9 နှင့် S9 + သည် ARCore ၏တိုးပွားလာနေသောအဖြစ်မှန်ကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ Google Augmented Reality သည် Samsung ၏အဆင့်မြင့်သို့တရားဝင်ကြေငြာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက
အချို့ Galaxy S9 နှင့် S9 + ၏အချို့ယူနစ်များသည်မျက်နှာပြင်၏အချို့သောနေရာများတွင်ပြproblemsနာများရှိသည်
အချို့ Galaxy S9 နှင့် S9 + ၏အချို့ယူနစ်များသည်မျက်နှာပြင်၏လည်ပတ်မှုပြproblemsနာများနှင့်အပြန်အလှန်အလုပ်မလုပ်သည့်နေရာများတွင်သေနေသောဇုန်များကိုပြသနေသည်။
Sharp Aquos S3 Mini: အလယ်အလတ်တန်းစားကဆက်လက်မြင့်တက်နေ ဦး မှာပါ
Sharp Aquos S3 Mini အကြောင်းသိလိုပါကတရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြသထားပြီးဖြစ်သည့်အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းအသစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များ, စျေးနှုန်းနှင့်ပစ်လွှတ်နေ့စွဲလူသိများကြသည်။
Xiaomi သည် MIUI 30 သို့မိုဘိုင်းဖုန်းအလုံး ၃၀ ကျော် update လုပ်လိမ့်မည်
Xiaomi ဖုန်း ၃၀ ကျော်သည် MIUI 30 သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည်။ လာမည့်ရက်သတ္တပတ်များအတွင်းကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်မှုအလွှာ၏ဤဗားရှင်းကိုအဆင့်မြှင့်တင်မည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
၎င်းသည် ZTE Nubia Z19 ၏ပထမဆုံးပုံရိပ်ဖြစ်နိုင်သည်
ယိုစိမ့်သောပုံရိပ်အသစ်က ZTE မှမသိသောစက်ကိုထုတ်ဖော်ပြသလိုက်သည်။ ၎င်းသည်နောက် ZTE Nubia Z19 ဖြစ်နိုင်ပါသလော။
Blackview P10000 Pro: ပထမဆုံးသတ်မှတ်ချက်များကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ ရက်အနည်းငယ်အတွင်းတရားဝင်တင်ဆက်မည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Huawei Nova 3e - အမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်
Huawei Nova 3e: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ သင့်နိုင်ငံတွင်တရားဝင်တင်သွင်းထားပြီးဖြစ်သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
HTC Desire 12 နှင့် Desire 12+ - ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်အဆင့်ဖုန်းများ
HTC Desire 12 နှင့် Desire 12+ - အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်သောထိုင်ဝမ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
အသစ်က Lenovo K5 နှင့် K5 Play ရဲ့ထူးခြားချက်များ
Lenovo K5 နှင့် K5 Plus တို့ကိုသင်တို့အားယခုနှစ်လယ်ပိုင်းပြိုင်ပွဲတွင် ၀ င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန်အတွက်အထူးသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စျေးနှုန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း။ အလွန်ရက်ရောသောဝိသေသလက္ခဏာများကိုတင်ဆက်ပေးပါသည်။ သူတို့ကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
BQ သည် ERE တစ်ခုတွင်၎င်း၏လုပ်သားအင်အားတစ်ဝက်ကိုလျှော့ချသည်
BQ သည်၎င်း၏ပြုပြင်လုပ်သားအင်အားကို ERE ဖြင့်ထက်ဝက်ကျဆင်းသွားသည်။ စပိန်ကုမ္ပဏီ၏လုပ်သားအင်အားကိုလျှော့ချရသည့်အကြောင်းရင်းများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Lenovo S5: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအတည်ပြုခြင်း တရားဝင်တင်ဆက်ထားပြီးဖြစ်သောတရုတ်ကုမ္ပဏီမှအလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်သည် Galaxy S9 + ၏ iPhone X ထက် ၁၀ ယူရိုနှင့် Galaxy Note 10 ထက် ၁၀ ယူရိုစျေးနှုန်းချိုသာသော်လည်းနောက်ဆုံးစျေးနှုန်းကွာခြားမှုရှိသည်။
OPPO R15: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ပစ်လွှတ်မှုအတည်ပြုလိုက်သည်။ brandပြီလမှာဖြန့်ချိမည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung က Android P ကိုထုတ်လွှင့်ပြီးဗီဒီယိုတည်းဖြတ်သူကိုဖယ်ထုတ်လိမ့်မယ်
နောက်ထပ် Android version ဖြစ်သော Android P သည် Samsung ၏ application ဖြစ်သော Movie Maker ကိုဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်
OUKITEL WP5000 - ရေစိုခံဖုန်းအသစ်၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
OUKITEL WP5000: တရားဝင်သတ်မှတ်ချက်များအတည်ပြုပြီး။ ရေစိုခံနိုင်သည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။ ၎င်းကိုမကြာမီဈေးကွက်တွင်ရောင်းချတော့မည်ဖြစ်သည်။
ပုံသစ်များတွင် Xiaomi Mi Mix 2S ၏ဒီဇိုင်းကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ မကြာမီတွင်စတင်မိတ်ဆက်မည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက၎င်းသည်၎င်း၏ဒီဇိုင်းအစစ်အမှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိထားပြီးဖြစ်သည်။
ဒီဇိုင်းနှင့်ကျောဘက်တွင်ရှိသောအလူမီနီယံအချောသပ်မှုကြောင့်၎င်းသည် ၅.၇ လက်မမျက်နှာပြင်ကိုအထောက်အပံ့ပေးနိုင်သည့်ဘေးထွက်အနားအနည်းငယ်ဖြင့်အထူးနိမ့်ကျသောတင်ဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်သော iLA Silk နှင့်တွေ့ဆုံပါ။ ဒီဖုန်းမှာ SD5.7 SoC, 430GB RAM နဲ့ 4GB Internal Memory ပါရှိပါတယ်။
Xiaomi Mi6သည် Project Treble ကိုထောက်ပံ့ထားပြီးဖြစ်သည်။ ဒီဂူဂဲလ်စီမံကိန်းအတွက်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်းကဘယ်လိုအထောက်အပံ့တွေရခဲ့သလဲဆိုတာကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
MIUI9ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တုန့်ပြန်မှုများနှင့်အုပ်စုဖွဲ့အသိပေးချက်များဖြင့်အဆင့်မြှင့်ထားသည်
လျင်မြန်စွာတုန့်ပြန်မှုများနှင့်အုပ်စုဖွဲ့အသိပေးချက်များ MIUI သို့ရောက်လာသည်။ ၉ Xiaomi ဖုန်းများ၏စိတ်ကြိုက်အလွှာ၏ဗားရှင်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ၊ အချို့သောမော်ဒယ်များသို့စတင်ရန်။
Galaxy J7 2018 ၏ပထမဆုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
Galaxy J7 2018. ၏ပထမအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ လာမည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းဈေးကွက်အတွင်းရောက်ရှိလာမည့် Samsung ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei P20 နှင့် Huawei P20 Pro တို့၏စျေးနှုန်းကိုစစ်ထုတ်သည်
Huawei P20 နှင့် Huawei P20 Pro တို့၏ဈေးနှုန်းများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်ဖုန်းများအတွက်ပေါက်ကြားခဲ့သည့်စျေးနှုန်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Android Auto သည်ချိတ်ဆက်သောအခါစမတ်ဖုန်းကိုအလိုအလျောက်သော့ဖွင့်သည်
နောက်ဆုံးပေါ် Android Auto update ဖြစ်သော version 2.9 သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မော်တော်ယာဉ်နှင့်ချိတ်ဆက်လိုက်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုသော့ဖွင့်ရန်အဓိကအသစ်အဆန်းဖြစ်သည်။
Google Pay အတွက် Wear OS ကိုစပိန်နိုင်ငံသို့တရားဝင်ရောက်ရှိသည်
Google Pay သည်စပိန်နိုင်ငံရှိ Wear OS ဖြင့်နာရီများကိုလာသည်။ ဂူဂဲလ်လည်ပတ်မှုစနစ်နှင့်အတူနာရီများသို့ရောက်ရှိနိုင်သောငွေပေးချေမှုလျှောက်လွှာစတင်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi နဲ့ပတ်သက်တဲ့သိချင်စိတ်လေးခုကသင်သေချာမသိခဲ့ပါဘူး။ လူသိများသောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဤသိလိုစိတ်များကိုရှာဖွေပါ။
Huawei သည် P20 ၏ကင်မရာကို DSLR နှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်
အာရှကုမ္ပဏီ Huawei သည် P20 ကိုရိုးရာ DSLR ကင်မရာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသောကြေငြာချက်အသစ်နှစ်ခုဖြင့်နှုတ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။
Blackshark သည်ဂိမ်းကစားသူများအတွက်အကောင်းဆုံး Xiaomi မိုဘိုင်းဖြစ်ပြီး Geekbench တွင်စစ်ထုတ်သည်
Xiaomi Blackshark သည်ဂိမ်းကစားသူများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော terminal တစ်ခုဖြစ်ပြီး Qualcomm SD845 SoC နှင့် 8GB RAM memory တပ်ဆင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Geekbench မှအလွန်ကောင်းမွန်သောဂုဏ်သိက္ခာနှင့်စံချိန်စံညွှန်းကိုခံစားနိုင်သည့်စံနမူနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့မှမဆိုးတော့ဘူး အသေးစိတ်ကိုပြောပြပါ
၎င်းတို့အားလုံးသည် Wear OS သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည့် Android Wear စမတ်နာရီများဖြစ်သည်
Google Wear OS မှ Android Wear သို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ သင်၏စမတ်နာရီသည်အသစ်ပြောင်းမည်၊ မရှိမည်နှင့် ပတ်သက်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကသင့်လျော်သောမော်ဒယ်များအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသမည်။
Wear OS: Android Wear restyling သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်
Wear OS: Android Wear ဗားရှင်းသည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ စမတ်နာရီများအတွက်တရားဝင် operating system ဖြစ်သောမကြာမီရရှိနိုင်မည့်စမတ်နာရီများအတွက် operating system ဗားရှင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei P10 နှင့် P10 Plus သည် Android 8.0 Oreo သို့အဆင့်မြှင့်တင်သည်
Android 8.0 Oreo သည် Huawei P10 နှင့် P10 Plus တို့ကိုတရားဝင်ရောင်းချသည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်ဖုန်းနှစ်လုံးသို့လာသည့်အသစ်ပြောင်းခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Geekbench တွင် Galaxy A6 နှင့် Galaxy A6 + ပေါ်လာသည်
Geekbench စာမျက်နှာမှ Galaxy A6 နှင့် Galaxy A6 + ၏အစောဆုံးအချက်အလက်များကိုဖော်ပြပေးသည်။
Huawei P20 Lite ကို ၃၆၉ ယူရိုဖြင့်ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်အီတလီ၌ရောင်းချပြီးဖြစ်သည်။ ပိုလန်တွင်လည်းယူရို ၃၈၀ ဖြင့်ရောင်းချသည်။ ဤ terminal တွင် notch ကဲ့သို့သောအထက်တွင်ဖော်ပြထားသောများစွာသောတပ်ဆင်ထားသည်။ ရှာတွေ့သည်!
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung ကitပြီလတွင်စပိန်တွင် ၂၅၆ GB သိုလှောင်မှုပုံစံကိုစတင်မိတ်ဆက်မည်ဟုအတည်ပြုခဲ့သည်။
Vivo V9 သည်ကုမ္ပဏီ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိအချက်အလက်များအားလုံးနှင့်အတူပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ဤအစွမ်းထက်သောအလယ်အလတ်တန်းစားအမြင့်ဆုံးကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်သောဝိသေသလက္ခဏာများအနက်ကျွန်ုပ်တို့သည် Qualcomm SD626 ပရိုဆက်ဆာ၊ ကြီးမားသော ၆.၃ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့်အခြားအင်္ဂါရပ်များကိုတွေ့ရသည်။ ရှာတွေ့သည်!
Oukitel WP5000 ဗီဒီယိုခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှု
Oukitel WP5000 သည်ခုခံကာကွယ်မှု ၁၄ ခုနှင့်၎င်းင်း၏မာကျောမှုနှင့်လှိုင်းများနှင့်ရေကိုခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်းပြသထားသောဗီဒီယိုတစ်ခုကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။
Headphone jack ဟုတ်ပါသည်။ OnePlus အတွက်နားကြပ်ပေါက်မဟုတ်ပါ
Headphone jack မရှိခြင်းသည်သုံးစွဲသူများစွာအတွက်ပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်နေပုံရသည်။ အနည်းဆုံးတော့နောက်ဆုံးပေါ် OnePlus CEO စစ်တမ်းကဖော်ပြသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်အာဏာအရှိဆုံးဖုန်း ၁၀ ခု၊
AnTuTu သည်စျေးကွက်အတွင်းတွင်တစ်လပြီးတစ်လအားဖြင့်စွမ်းအားအမြင့်ဆုံးသောဆိပ်ကမ်းများစာရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထံယူဆောင်လာသည်။ ထိုအခါသမယတွင် Google Pixel 2၊ Samsung Galaxy S8 နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်ရသောအခြားကိရိယာများမရှိခြင်းကိုသတိပြုမိနိုင်သည်။ ဒီအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပေမယ့်သောအမှုမဖြစ်ခဲ့ပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
ဥရောပအတွက် Xiaomi Redmi Note5Pro ၏စျေးနှုန်းများကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
Xiaomi Redmi Note5Pro ၏ဈေးနှုန်းများကိုဥရောပတွင်တွေ့ရှိ ဥရောပမှာဖြန့်ချိတဲ့အချိန်မှာတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်းရဲ့စျေးနှုန်းတွေအကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာပါ။
မျက်နှာအသွင်အပြင်အသစ်ဖြစ်သော Huawei Nova2Lite ကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့တင်ပြပါသည်
Huawei သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော Android မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနှင့်ပါ ၀ င်သည့် Nova2ဖုန်းကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဒီပစ္စည်းကိုဖိလစ်ပိုင်မှာထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီး၊ အချိန်ကြာမြင့်စွာကစျေးကွက်တွင်လက်ခံမှုများစွာရခဲ့သောအာရှကုမ္ပဏီမှရွေးချယ်သောနေရာဖြစ်သည်။ ငါတို့ကိုမင်းကိုပြတယ်။
Essential Phone သည် Android Oreo 8.1 ကိုစတင်ရရှိသည်
Terminal ဖုန်းများအတွက် Android 8.1 update ကို Essential Phone သည်စတင်ရရှိပြီး ဖြစ်၍ Android 8.0 update ကိုကျော်သွားသည်
Fitbit Versa: အမှတ်တံဆိပ်၏စျေးပေါသောစမတ်နာရီ
Fitbit Versa: စျေးပေါသောစမတ်နာရီသစ်၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ။ စျေးကွက်ရှိမော်ဒယ်များထက်စျေးနှုန်းချိုသာသောအမှတ်တံဆိပ်၏နာရီအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
အရာအားလုံးကဖော်ပြနေပုံရသည်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung သည်အက်ပဲလ်ကဲ့သို့ဤနည်းပညာကိုလုံးဝစွန့်လွှတ်ပြီးဖန်သားပြင်အောက်ရှိလက်ဗွေရာအာရုံခံကိရိယာကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အစီအစဉ်မရှိကြောင်းဖော်ပြနေသည်။
Nokia9တွင် notch နှင့် fingerprint sensor ပါဝင်ပြီး screen အောက်တွင်ရှိသည်
Nokia9မှာ screen ပေါ်မှာ notch and fingerprint sensor ရှိနိုင်တယ်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်ဖုန်းတွင်ထည့်သွင်းရန်မျှော်လင့်ထားသည့်အင်္ဂါရပ်နှစ်ရပ်အကြောင်းကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
Huawei P20 မော်ဒယ်များနှင့်အရောင်များကိုစစ်ထုတ်ထားသောဓာတ်ပုံများ
Huawei P20, P20 Pro နှင့် P20 Lite: သူတို့ရဲ့ဒီဇိုင်းများနဲ့တွေ့ဆုံပါ။ Huawei ၏အဆင့်မြင့်ဖုန်းသစ်များစျေးကွက်အတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်မည့်ဒီဇိုင်းနှင့်အရောင်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung Galaxy S9 တွင်လည်း Microsoft Edition ဗားရှင်းရှိသည်
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung နှင့် Microsoft တို့သည် Microsoft Store ၌မိုက်ကရိုဆော့ဖ်စတိုးတွင် Galaxy S9 နှင့် Galaxy S9 + ကိုထပ်မံဝယ်ယူရန်သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
Huawei ၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ် Honor 7C နှင့်တွေ့ဆုံပါ
Huawei သည် ၁၈. ၉ format၊ ရှစ် core Core Qualcomm Snapdragon7SoC နှင့် ၅.၉၉ လက်မ HD + မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည့်အလယ်အလတ်တန်းစား Honor 5.99C ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး ၃ GB RAM နှင့် 18GB တို့ပါဝင်သည်။ ၏ ROM နှင့်အခြားသော9/ 450GB တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုသိထားပါ။
Android Wear သည်၎င်း၏အမည်ကိုပြောင်းလဲပြီး Wear OS ဖြစ်လာသည်
Wear OS: Android Wear ကိုအမြဲတမ်းနာမည်ပြောင်းထားသည်။ အသုံးပြုသူများကိုစတင်ရောက်ရှိနေသောစမတ်နာရီလည်ပတ်မှုစနစ်၏အမည်သစ်အကြောင်းကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
Xiaomi Mi7ဟာသူ့ရဲ့ firmware အရ notch နဲ့အတူလာလိမ့်မယ်
Xiaomi Mi7သည် Mi Mix 2S ကဲ့သို့ပင်၎င်း၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် notch ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဤကိရိယာသည် notch နှင့်အတူ 3D facial အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်အတူလာလိမ့်မည်ဟုထုတ်ဖော်သောဖိုင်ကုဒ်များများစွာအပြင်နောက်ထပ်အများအပြားကိုလည်းအတည်ပြုသည်။ သတ်မှတ်ချက်များ။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
Huawei Y9 2018: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ တရုတ်တံဆိပ်မှအလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။ ၎င်းကိုတရားဝင်တင်ခဲ့ပြီးထိုင်းနိုင်ငံတွင်လည်းစတင်ခဲ့သည်။
Samsung သည်၎င်း၏ terminal ၏ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောပြုပြင်နိုင်ခြင်းကိုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်မည်သည့်အခါကမှမဖော်ပြခဲ့ပါ။ Galaxy S9 + နှင့်အတူတူပင်ထိုလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်တည်ရှိနေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။
Google Assistant က Android 5.0 Lollipop ပါရှိပါတယ်
Google Assistant က Android 5.0 Lollipop ပါရှိပါတယ်။ ဒီ operating system version ကိုသုံးပြီးတက်ဘလက်တွေပေါ်မှာကုမ္ပဏီလက်ထောက်ရောက်ရှိလာခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
Huawei P20 နောက်ခံပုံများကိုသူတို့၏တင်ပြမှုမတိုင်မီစစ်ထုတ်သည်
Huawei P20 နှင့်၎င်း၏ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးကွဲများဖြစ်သော Android လောကသို့တရားဝင်တင်ဆက်မှုမတိုင်မီသုံးပတ်အလိုတွင် Ewan Blass သည်နံရံကိုသူတို့၏မူလ resolution ဖြင့်စစ်ထုတ်ခဲ့သည်။
Moto Z အကွာအဝေးတွင်ပုံစံအသစ်များရှိလိမ့်မည်ဟု Motorola ကအတည်ပြုသည်
Motorola သည် Moto Z အကွာအဝေးတွင်မော်ဒယ်လ်အသစ်များကိုစတင်ဖြန့်ချိမည်။ ရက်အနည်းငယ်ကောလာဟလများအပြီးတွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်ဖုန်းအတွင်း၌ဖုန်းအသစ်များရှိလိမ့်မည်ဟုအတည်ပြုခဲ့သည်။
Galaxy S9 နှင့် Galaxy S9 + တို့ကိုရက်အနည်းငယ်သာဈေးကွက်သို့တင်ပို့သည့်အချိန်တွင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည်မတ်လအတွက်ပထမဆုံးလုံခြုံရေး update ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Huawei P20 တွင် Porsche Design version ရှိသည်
Huawei P20 Porsche ဒီဇိုင်း - ဖုန်း၏အထူးမူကွဲအသစ်။ စျေးကွက်ရှိ Galaxy S9 သို့မဟုတ် iPhone X တို့၏စျေးနှုန်းထက်ကျော်လွန်သွားသောဤကန့်သတ်ထားသောထုတ်ဝေခြင်းဖုန်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung ကုမ္ပဏီသည်ပထမဆုံးသောကြော်ငြာကိုကိုရီးယားရုပ်မြင်သံကြားတွင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏အဓိကစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပြသသည်။
Xiaomi Mi6 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Xiaomi Mi6 ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ၄၉ မိနစ်ကျော်ရိုက်ကူးထားသောဗွီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်ချက်တွင်တရုတ်ပြည်၏ဤဆိပ်ကမ်းများထဲမှတစ်ခုကိုဝယ်ယူရန်သင်ဆုံးဖြတ်ရန်သင်သိထားသင့်သမျှကိုပြောပြသည်။
Galaxy A8 မတ်လလုံခြုံရေး Update ကိုရပြီ
မတ်လတွင် Samsung Galaxy A8 (2018) အတွက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ update ကို Samsung မှယောက်ျားများကစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။
အကောင်းဆုံး eBay SuperWeekend သည်
eBay သည်ဤ SuperWeekend တွင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကမ်းလှမ်းချက်များစွာကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး၊ ယခုတစ်ကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မှ eBay အတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်အတူတနင်္ဂနွေနေ့ကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောဈေးနှုန်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါမည်။ ဤတွင်သင်ဤမိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်များထဲမှရရန်သင့်အတွက်အထူးလျှော့စျေးများစွာကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ရှာတွေ့သည်!
Android Oreo သည် Galaxy Note 8, Galaxy S7 နှင့် Galaxy S7 Edge များအတွက်ဖြန့်ချိမည့်နေ့ရက်ဖြစ်သည်
တူရကီမှ Galaxy Note 8 နှင့် S7 နှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးသတင်းများအရ Android Oreo ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းသည်မကြာမီရောက်ရှိလာတော့မည်ဖြစ်သည်။
Nexus သည် Android P. ကိုလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ Android P ကိုဖုန်းများသို့မတင်ရန်ကုမ္ပဏီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi သည်မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင်မက်ဒရစ်မြို့၌၎င်း၏စတိုးဆိုင်သစ်ကိုဖွင့်မည်။ လာမယ့်အပတ်မှာကျင်းပမယ့်မက်ဒရစ်မှာရှိတဲ့တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏တတိယစတိုးဆိုင်ဖွင့်လှစ်အကြောင်းကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။ တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်စပိန်စျေးကွက်ကိုအပြင်းအထန်ကတိကဝတ်ပြုသည်
ဒီဗီဒီယိုအရ Xiaomi Mi Mix 2S ရဲ့ညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှာအထစ်တစ်ခုပါရှိပါတယ်
Xiaomi Mi Mix 2S သည်နောက်ဆုံးပေါ်ယိုစိမ့်မှုအရညာဘက်အပေါ်ညာဘက်ရှိထစ်တစ်ခုပါရှိသည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုသူတစ် ဦး အားအသုံးပြုနေသည်ကိုတွေ့ရသည့်ဗွီဒီယိုတစ်ခုတွင်ဤအရာသည်မကြာသေးမီကမှအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်းတန်ဖိုးထားနိုင်သည်။ ရှာတွေ့သည်!
OnePlus6သည်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်များကိုစံသတ်မှတ်ချက်များဖြင့်သာလွန်သည်
OnePlus6၏အခြေခံစံနှုန်းသည်ပြိုင်ဘက်များထက်သာလွန်သည်။ ဤစမ်းသပ်မှုများတွင်ဖုန်းရရှိသောရမှတ်များအကြောင်းကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
Huawei သည်ဉာဏ်ရည်တုကိုအလယ်အလတ်အဆင့်သို့ရောက်စေသည်။ ကုမ္ပဏီ၏အစီအစဉ်များနှင့်၎င်းတို့မည်သို့အသုံးပြုလိုသည်ကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
Nokia သည် Android Enterprise အကြံပြုထားသောပရိုဂရမ်တွင်ပါ ၀ င်သည်
Nokia သည် Android Enterprise အကြံပြုသည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဖုန်းနံပါတ်များအတွက်စီးပွားရေးအသိအမှတ်ပြုစီမံကိန်းအတွက်အမှတ်တံဆိပ်၏ ၀ င်ခွင့်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
မတ်လ ၂၇ ရက်တွင် Xiaomi က Mi MIX 2S ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်
Xiaomi Mi MIX 2S ကိုမတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင်တရားဝင်ပြသသွားမည်ဖြစ်သည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်းအသစ်စတင်ခြင်းနှင့်တင်ဆက်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
Vivo Apex သည်ယခုနှစ်တတိယသုံးလပတ်အတွင်းဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်
နောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာသောကောလာဟလများအရ Vivo Apex သည်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးယခင် MWC တွင်တင်ပြခဲ့သောအယူအဆတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်။
သီးသန့် Xperia XZ2 နောက်ခံပုံများရယူပါ
ဤဆောင်းပါး၌ Sony Xperia XZ2 ၏နောက်ခံပုံများကိုသူတို့၏မူလ resolution ဖြင့်ဖော်ပြပေးသည်
Huawei P20 Lite သည် TENAA သို့ရောက်ရှိပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြသည်
Huawei P20 Lite ကိုမကြာသေးမီက TENAA အားသက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များတွင်ပေါက်ကြားခဲ့ပြီးယခင်ကပေါက်ကြားခဲ့သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ အသေးစိတ်ကိုသင့်အားပေးသည်။
Nomu M6 သည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနှင့်မတူကွဲပြားသောစတိုင်နှင့်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ
ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်စမတ်ဖုန်းလိုအပ်သည့်အင်္ဂါရပ်များအားလုံးကိုစွန့်လွှတ်စရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်တို့ကိုနေ့စဉ်သာယာကြည်လင်သောသယ်ဆောင်နိုင်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများစွာပါ ၀ င်သောအလွန်အစွမ်းထက်သောစမတ်ဖုန်း Nomu M6 နှင့်တွေ့ဆုံပါ။
အရောင်းမြှင့်တင်ရေးပုံရိပ်အသစ် Huawei P20 စီးရီးတွင်နောက်ကင်မရာသုံးခုကိုစီစဉ်ထားသည်ကိုပြသသည်။
Alcatel 3C - စပိန်နိုင်ငံမှာအသစ်ထွက်နိုင်တဲ့အကွာအဝေး။ ယခုကျွန်ုပ်တို့တိုင်းပြည်တွင်ရရှိနိုင်သည့် Alcatel ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
HOMTOM HT70: ၁၀၀၀၀ mAh ဘက်ထရီသည်အပါးဆုံးဖုန်းဖြစ်သည်။ Aprilပြီလတွင်ဖြန့်ချိမည့်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Honor 7C ကိုလာမည့်မတ်လ ၁၂ ရက်တွင်တင်ပြမည်
Huawei Honor 7C ကိုမတ်လ ၁၂ ရက်တွင်တရုတ်ကုမ္ပဏီကတင်ပြလိမ့်မည်။ ဤအရာကိုမကြာသေးမီကမြင်တွေ့ခဲ့ရသည့်ယိုစိမ့်မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဝေးလွန်းခြင်းမရှိသေးသောတင်ဆက်သည့်ရက်စွဲကိုမြင်နိုင်ပြီးငါးရက်သာကွာဝေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရှာတွေ့သည်!
၁၈: ၉ မျက်နှာပြင်နှင့် ၄၈၀၀ mAh ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည့်အားကောင်းသောမိုဘိုင်းဖုန်း Energizer Hardcase H570S
အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ Energizer သည် ၅.၇ လက်မ FullHD + 570: 18 မျက်နှာပြင်နှင့် ၄၈၀၀mAh ဘက်ထရီပမာဏကြီးမားသည့်ပထမဆုံးအားကောင်းသည့်စမတ်ဖုန်းဖြစ်သော Energizer Hardcase H9S ကိုတင်ပြသည်။ ဤ terminal တွင် IP5.7 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ Mediatek MT4.800 quad-core SoC, 68GB RAM နှင့်အခြားအရာများတပ်ဆင်ထားသည်။
Bixby တိုးတက်စေရန် Samsung သည် AI စတင် ၀ ယ်သည်
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် Bixby ကိုတိုးတက်စေရန် Artificial Intelligence စတင်တည်ထောင်သည့် Kngine ကုမ္ပဏီကို ၀ ယ်ခဲ့သည်ဟုတရားဝင်အတည်ပြုခဲ့သည်
Bloomberg ၏အဆိုအရ Huawei ၏ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လက်ထောက်အဖြစ်လုပ်ကိုင်နေပြီး၎င်းသည်တရုတ်နယ်မြေ၌သာစတင်မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအတွက်နောက်ထပ်မယုံနိုင်စရာ application တစ်ခု
ဒီစတိုင်လ်ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဒီစမတ်ဖုန်း (သို့) တက်ဘလက်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal ၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအတွက်နောက်ထပ်မယုံနိုင်စရာကောင်းသော application တစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူဆောင်လာပါပြီ။
အမျိုးမျိုးသော Oppo R15 နှင့် R15 Dream Mirror Edition သတ်မှတ်ချက်များကို TENAA မှပေါက်ကြားစေသည်
ထိပ်ပိုင်းအလယ်ပိုင်းရှိအဖွဲ့ ၀ င်နှစ် ဦး ဖြစ်သော Oppo R15 နှင့် Oppo R15 Dream Mirror Edition တို့၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များမှာမကြာသေးမီကပေါက်ကြားခဲ့ပြီး TENAA မှတစ်ဆင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့မှသတင်းကိုတိုးချဲ့!
Moto E5 အသစ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
Moto E5: Motorola ရဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်။ ဖုန်းသုံးလုံးဖြင့်အမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
OUKITEL WP5000 သည်အကြမ်းခံသောစမတ်ဖုန်းဖြစ်ပြီး ၅၀၀၀ mAh ဘက်ထရီ၊ IP5.000 ခုခံမှုနှင့် ၁၈: ၉ မျက်နှာပြင်
အသုံးပြုသူအများစုကိုရည်ရွယ်သော OUKITEL terminal အသစ်သည် WP5000 ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တုန်ခါမှုမရှိဘဲရေနှင့်ဖုန်မှုန့်များကိုခံနိုင်ရည်သာမကဘဲ ၅၀၀၀ mAh ဘက်ထရီနှင့် ၁၈: ၉ မျက်နှာပြင်ကိုလည်းပါပေးထားသည်။
HTC Imagine သတ်မှတ်ချက်များကိုဖော်ပြခဲ့သည်
HTC Imagine အသစ်၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ Aprilပြီလတွင်ဖြန့်ချိမည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi Mi6နှင့် Xiaomi Mi MIX2တို့သည်မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုခံရလိမ့်မည်
မျက်နှာ၏အသိအမှတ်ပြုမှုသည် Xiaomi Mi6နှင့် Xiaomi Mi MIX2ကိုရရှိသည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်းနှစ်လုံးအတွက်လုပ်ဆောင်မှုအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Essential သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် Vivo APEX ကဲ့သို့သောဖုန်း၏ထိပ်ပိုင်းမှထွက်ပေါ်လာသည့် Popup ကင်မရာကိုမှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်
Vivo APEX ရှိပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သောကင်မရာသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Essential, Andy Rubin ၏ကုမ္ပဏီမှမှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီး၎င်းကို Essential ဖုန်းသို့ပို့နိုင်သည်
၂၀၁၆ ဆိပ်ကမ်းအချို့အတွက် Samsung update ကိုမထုတ်ပြန်တော့ပါ
လတ်နှင့်သုံးလတစ်ကြိမ်လုံခြုံရေးမွမ်းမံမှုအစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်မည့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမွမ်းမံမှုများကိုရပ်ဆိုင်းတော့မည့်ဆိပ်ကမ်းများကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung မှကြေငြာခဲ့သည်။
Xiaomi ကဒီလထဲမှာ Android Go နဲ့စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုစတင်မိတ်ဆက်တော့မယ်
Android Go နှင့်အတူပထမဆုံး Xiaomi ဖုန်းကိုမတ်လတွင်ရောက်ရှိမည်။ ဒီ operating system ဗားရှင်းနဲ့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးဖုန်းကိုဖွင့်ဖို့ကုမ္ပဏီရဲ့အစီအစဉ်တွေအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
HTC U12 ဖြန့်ချိမည့်နေ့၊
HTC U12 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုသင့်အားပြောပြပါမည်
ဒီဇိုင်းအသစ်စတင်ခြင်းနှင့်အတူ Sony သည် Xperia range ကိုဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိချိန် မှစတင်၍ ဗီဒီယိုအသစ်တစ်ခုထုတ်ဝေခဲ့သည်။
စွပ်စွဲထားသည့် HTC Desire 12 Plus ၏အဟောင်းဖြစ်သော Desire 12 ၏မူကွဲပေါ်လာသည်
လွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်က HTC Desire 12 Plus ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ၅.၉၉ လက်မမျက်နှာပြင်၊ SD12၊ 5.99GB RAM နှင့်အခြားအရာများပါ ၀ င်မည့် Desire 450 ၏ပိုမိုအစွမ်းထက်သောအလင်းရောင်ပေါ်လာသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း Galaxy S9 Plus နှင့်၎င်း၏ကင်မရာနှစ်မျိုးသည်မည်သည့်စမတ်ဖုန်းတွင်မဆိုလက်ရှိစျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်လာသည်။
DisplayMate ကုမ္ပဏီ၏အဆိုအရမည်သည့်အမျိုးအစားနှင့်မဆိုဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်မျက်နှာပြင်များအားလုံးကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်တာဝန်ယူထားသည့် Galaxy S9 သည်ယနေ့စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ iPhone X ထက်ယခုအချိန်အထိအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ။
Samsung ကအနာဂတ်စမတ်ဖုန်းဒီဇိုင်းသုံးခုကိုမူပိုင်ခွင့်ပြု အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအများကြီးဆွဲဆောင်သောကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်၏ဤမူပိုင်ခွင့်များအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ဒီဇိုင်းကို Huawei P20 Lite ကိုစစ်ထုတ်သည်
Huawei P20 Lite: အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ဒီဇိုင်းပေါက်ကြားသည်။ ယခုလနှောင်းပိုင်းတွင်တင်ဆက်မည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
ဖေဖော်ဝါရီလ Galaxy S8 နှင့် S8 + အတွက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ update ကိုယခုရရှိနိုင်ပါသည်
ဖေဖော်ဝါရီလအတွက် Galaxy S8 နှင့် S8 + အတွက်လုံခြုံရေး update ကိုသဟဇာတဖြစ်သော terminals များမှတစ်ဆင့် download ပြုလုပ်နိုင်သည်။
OnePlus သည် notch ဖက်ရှင်ကို၎င်း၏နောက်ထပ် terminal ဖြစ်သော OnePlus6နှင့်ပူးပေါင်းသည်
iPhone X ၏ notch ကိုကူးယူဟန်တူသောနောက်ဆုံးထုတ်လုပ်သူမှာ OnePlus ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏နောက်မော်ဒယ်တွင်ပေါက်ကြားခဲ့သည့်ပထမဆုံးပုံရိပ်များအရသိရသည်။
Xiaomi Mi Mix 2S နှင့် Mi7တွင် ၆.၀၁ လက်မ OLED မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်
Xiaomi Mi Mix 2S နှင့် Mi7သည်နောက်ဆုံးထွက်ကောလဟလများအရ ၆.၀၁ လက်မအရွယ် Samsung OLED မျက်နှာပြင်နှင့်ထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုမကြာသေးမီကမှဖြန့်ချိခဲ့သော်လည်းတရုတ်ကုမ္ပဏီကအတည်ပြုခြင်းမရှိပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
ASUS Zenfone Max M1 - ဘက်ထရီကြီးမားသော ASUS အသစ် MWC တွင်ပြသခဲ့သည်
ASUS Zenfone Max M1: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ MWC 2018 တွင်ပြသခဲ့သည့် ASUS ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
အကြမ်းခံစမတ်ဖုန်းများသည်ရုပ်ဆိုးစရာမလိုပါ။ M6 နှင့် NOMU ကသက်သေပြသည်
NOMU ကုမ္ပဏီ၏လှုပ်ခတ်မှုနှင့်ရေဒဏ်ခံနိုင်မှု၏ terminal အသစ်သည် NOMU6ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဤအမျိုးအစား၏ရိုးရာဗေဒကိုချန်လှပ်ထားသည်။
Xiaomi Mi6၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗားရှင်းသည် Android 8.0 Oreo သို့အဆင့်မြှင့်တင်သည်
Android 8.0 Oreo သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Xiaomi Mi6ဗားရှင်းသို့ရောက်ရှိသည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်ဖုန်း၏နောက်ဆုံးသတင်းကိုလေ့လာပါ။
Galaxy S8 နှင့် S8 + တို့၏သက်တမ်းသည် Galaxy S9 နှင့် S9 + တို့၏သက်တမ်းနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်
တရား ၀ င် Galaxy S9 နှင့် Galaxy S9 ၏တရားဝင်ဘက်ထရီသုံးစွဲမှုကိန်းဂဏန်းများသည်တေးဂီတဖွင့်ချိန်၌ဘက်ထရီသုံးစွဲမှု မှလွဲ၍ ၎င်းကို၎င်း၏ယခင်မော်ဒယ်လ်များတွင်တွေ့နိုင်သည်။
UHANS i8 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
UHANS i8၊ ၅.၇ လက်မ၊ 5,7GB RAM နှင့် Sony dual-ကင်မရာပါဝင်သည့်မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးနှင့်သင့်အားလည်းလည်းစွန့်ခွာမည်မဟုတ်ပါ။ သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုကြည့်ပြီးငါတို့ကစေ့စေ့စပ်စပ်စမ်းသပ်ခဲ့တယ် တန်ဖိုးရှိလား
Samsung က Galaxy S9 ကိုဆက်ခံမည့် S series ကိုဖယ်ထုတ်နိုင်သည်
DJ Koh နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများအရ Galaxy S9 ၏ဆက်ခံသူသည် Samsung S series ၏နောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။
DOOGEE V: MWC ၂၀၁၈ တွင်အဆင့်မြင့်တင်ဆက်မှုအမှတ်တံဆိပ်ဖုန်း၏လူကြိုက်များသောဖြစ်ရပ်တွင်ပိုမိုသိရှိလိုပါက။
ASUS Zenfone 5Z, Zenfone5နှင့်5Lite: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များစတင်စျေးနှုန်း။ MWC 2018 တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တင်ပြသောဖုန်းများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Android Go ဖုန်းများကို MWC 2018. တွင်ပြသခဲ့သည်။ လူကြိုက်များသောဖြစ်ရပ်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော operating system ၏အလင်းရောင်ဗားရှင်းကို အသုံးပြု၍ ဖုန်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
၅၈၀၀ mAh ဘက်ထရီပါသည့်လက်ကိုင်ဖုန်း Energizer Hardcase H590S နှင့်တွေ့ဆုံပါ
ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီ Avenir Telecom မှစွမ်းအင်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောစွမ်းအင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်စမတ်ဖုန်းဖြစ်သော ၅၈၀၀mAh ရှိသည့် Energizer Hardcase H590S စမတ်ဖုန်းကိုကြေငြာခဲ့သည်။ အဲဒါကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
ယခု Samsung Galaxy S9 ကို Amazon တွင်ဝယ်ယူပြီးယူရို ၃၇၆ အထိလျှော့စျေးရယူပါ။ ဘယ်လိုရရမယ်ဆိုတာရှင်းပြတယ်
Samsung Galaxy S9 (သို့) S9 Plus အသစ်ကို Amazon တွင်ကြိုတင်မှာယူပြီးတရားဝင်စျေးနှုန်းဖြင့်ယူရို ၃၇၆ အထိလျှော့စျေးဖြင့်ယူပါ။
Wiko Tommy 3, Lenny5နှင့် Jerry 3: အမှတ်တံဆိပ် Android Go ဖြင့်နိမ့်ကျသည်
Wiko Tommy 3၊ Lenny5နှင့် Jerry 3: အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ ပြင်သစ်အမှတ်တံဆိပ်မှနိမ့်နိမ့်ဖုန်းသုံးလုံးအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Samsung က Galaxy S9 နှင့် S9 + အတွက် Treble အထောက်အပံ့ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်
Samsung Galaxy S9 နှင့် S9 + တွင် Treble အထောက်အပံ့ရှိသည်။ ဤစီမံကိန်းကိုထောက်ပံ့ရန်ကုမ္ပဏီ၏အတည်ပြုချက်ကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
Sony Ear Duo သည်ဂျပန်ကုမ္ပဏီ၏ကြိုးမဲ့နားကြပ်အသစ်ဖြစ်သည်
Sony သည် MWC တွင် True Wireless နားကြပ်၊ Sony Ear Duo၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ၏လက်ထောက်ဖြစ်သော Siri သို့မဟုတ် Google Assistant သို့ဝင်ရောက်ရန်ကတိကဝတ်သစ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
Hoox K31 - MWC တွင်တင်ပြသည့်ကုမ္ပဏီများအတွက်အလုံခြုံဆုံးမိုဘိုင်း
Hoox K31 - MWC တွင်တင်ပြသည့်ကုမ္ပဏီများအတွက်လုံခြုံမှုအရှိဆုံးမိုဘိုင်း။ လူကြိုက်များသည့်အဖြစ်အပျက်တွင်ဖော်ပြပြီးသောဤလုံခြုံမှုအရှိဆုံးဖုန်းအကြောင်းကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
Sony Xperia XZ2 နှင့် XZ2 Compact အသစ်နှင့်တွေ့ဆုံပါ
Sony Xperia XZ2 နှင့်အညီအမျှစွမ်းအားရှိသော်လည်းသေးငယ်သည့်ဗားရှင်းဖြစ်သော Sony Xperia XZ2 Compact တွင် MWC၊ Sony Xperia ၏ပြခန်းအသစ်များကိုရှာဖွေပါ။
Leagoo သည် MWC တွင် Leagoo S9၊ iPhone X နှင့်ပထမဆုံး Leagoo Power5Clone ၇၀၀၀ mAh ဘက်ထရီကိုပြသသည်။
Leagoo သည်မကြာသေးမီလများအတွင်းအထင်ရှားဆုံးဖြစ်ခဲ့သည့်အာရှကုမ္ပဏီများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည့် Leagoo S8 နှင့် Leagoo Power5တို့၏ဆိပ်ကမ်းအသစ်နှစ်ခုကို MWC တွင်ပြသခဲ့သည်။
Android One နှင့်ဖုန်းတစ်လုံးရှာဖွေနေပါသလား။ ဤရွေ့ကား MWC 2018 မှာတင်ဆက်ခဲ့ကြသူမြားဖြစ်ကြသည်
ဤရွေ့ကား MWC 2018. တွင်တင်ဆက်ထားသည့် Android One ဖုန်းများဖြစ်သည်။ ဤ operating system ၏ဗားရှင်းနှင့်အခမ်းအနား၌တင်ပြခဲ့သောဖုန်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung Galaxy S18 နှင့် S9 Plus ၏ Art Emojis အသစ်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကို MWC9 မှပြသမည်
MWC18 မှမှတ်တမ်းတင်ထားသောဗီဒီယိုသည် Samsung Galaxy S9 နှင့် Samsung Galaxy S9 Plus တို့၏ Art emojis အသစ်များမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်ပြသရန်ဖြစ်သည်။
VOYO I8 Max - Banggood တွင်လျှော့စျေးဖြင့်အပြည့်စုံဆုံး ၁၀ လက်မတက်ဘလက်
Bangood: လျှော့စျေးဖြင့် VOYO I8 Max Android တက်ဘလက်။ ယခုလူကြိုက်များသည့်စတိုးတွင်လျှော့စျေးဖြင့်သင်ယူနိုင်သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ဤတက်ဘလက်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Ulefone T2 Pro နှင့် Ulefone X: Ulefone ၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်
UleFone T2 Pro နှင့် Ulefone X: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ MWC 2018 တွင်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်တင်ပြသောဖုန်းအသစ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
၎င်းသည် Galaxy S9 ၏ပထမဆုံးတရားဝင်ကြေငြာချက်ဖြစ်သည်
Samsung သည်၎င်း၏ Galaxy S9 ၏ပထမဆုံးဗွီဒီယိုကို YouTube channel တွင်တင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ကျန်သောစမတ်ဖုန်းများကိုကင်မရာဖြင့်လှိမ့်ဝင်ရန်ဈေးကွက်ကိုထိုးနှက်နေသော terminal တစ်ခုဖြစ်သည်။
Samsung Renove - Galaxy S9 အတွက်လျှော့စျေးစနစ်
Samsung Renove - Galaxy S9 အတွက်လျှော့စျေးစနစ်။ မတ်လ ၂၅ ရက်အထိကြာမည့်ဤလျှော့စျေးအစီအစဉ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Galaxy S9 ရှိ microSD ကဒ်များမှအများဆုံးသိုလှောင်နိုင်သည့်ပမာဏမှာ 400 GB ဖြစ်ပြီးမည်သည့်လိုအပ်ချက်ကိုမဆိုဖုံးလွှမ်းရန်လုံလောက်သောနေရာထက်ပိုသည်။
Huawei P20 ၏ဓာတ်ပုံအသစ်ပေါက်ကြားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့တွင်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းရှိသည်
ZTE Temp Go: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ Android Go နှင့်အတူအလုပ်လုပ်မည့်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ZTE Blade V9 သည်တရားဝင်ဖြစ်ပြီးတရားဝင်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပြည့်စုံသည်
ZTE Blade V9: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ အလွန်ကောင်းမွန်သောခေတ်မီဒီဇိုင်းနှင့်ကင်မရာနှစ်လုံးဖြင့်လောင်းနိုင်သောအမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
MWC 2018 တွင်တင်ပြခဲ့သော Nokia စမတ်ဖုန်းငါးလုံးကိုရှာဖွေပါ
Nokia: MWC 2018. တွင်တင်ဆက်သော Smarthpones ကိုယနေ့ဘာစီလိုနာတွင်ကျင်းပပြုလုပ်သောပွဲ၌အမှတ်တံဆိပ်တင်ဆက်ခဲ့သောဖုန်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung Galaxy S9 သည်ယခုအခါတရားဝင်ဖြစ်သည်။ Samsung ၏စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်နှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ
တစ်နှစ်နီးပါးခန့်ကောလဟာလများအပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးတွင်သံသယများကိုဖယ်ရှားခဲ့ပြီး Samsung Galaxy ၏အသစ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Galaxy S9 ၏ထူးခြားချက်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သည်။
Huawei MateBook X Pro: မျက်နှာပြင်မရှိတဲ့လက်တော့ပ်
Huawei MateBook X Pro: ပထမဆုံးသော Laptop သည် Frameless Screen ပါ ၀ င်သည်။ MWC 2018 တွင်တင်ဆက်ခဲ့သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏လက်တော့ပ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei MediaPad M5: စတုတ္ထမျိုးဆက် Huawei တက်ဘလက်များ
Huawei MediaPad M5: အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့် MWC 2018. ကိုစတင်ခြင်း MWC 2018 တွင်တင်ဆက်ခဲ့သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏တက်ဘလက်အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်နှင့် Xiaomi တို့သည်မိုand်းတိမ်နှင့်အတုထောက်လှမ်းရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်စီမံကိန်းများကိုတီထွင်ရန်ပူးပေါင်းကြသည်
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်နှင့် Xiaomi တို့သည်အတုထောက်လှမ်းရေး၊ cloud hardware နှင့်စီမံကိန်းများကိုလုပ်ဆောင်သည်။ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုလုံးမကြာသေးမီကရရှိခဲ့သောသဘောတူညီချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက
Alcatel သည် MWC 1. တွင်စီးရီး ၁၊ ၃ နှင့် ၅ တို့ကိုအသစ်တင်ဆက်သည်။ တရားဝင်တင်ပြပြီးသောအမှတ်တံဆိပ်အသစ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Alcatel 1X: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ Android Go နှင့်အတူပါ ၀ င်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏နိမ့်ကျသောဖုန်းအသစ်အကြောင်းစတင်လေ့လာပါ။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က BQ သည်စမတ်ဖုန်း ၁.၁ သန်းရောင်းချခဲ့သည်
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က BQ သည်စမတ်ဖုန်း ၁.၁ သန်းရောင်းချခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကစပိန်ကုမ္ပဏီ၏ရောင်းအားအချက်အလက်များအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Samsung Galaxy S9 နှင့် S9 + ၏ပထမဆုံးဗီဒီယိုသည်မှားယွင်းစွာပေါက်ကြားခဲ့သည်
ဤတွင်သင့်ကို Samsung Galaxy S9 နှင့် S9 + ၏ပထမဆုံးဗီဒီယိုကိုတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်မှားယွင်းစွာပေါက်ကြားထားသည်။ ၎င်း၏တရားဝင်ချန်နယ်တွင်မရှိတော့သောဗွီဒီယိုတစ်ခုကို Androidsis တွင်သင့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည်။
GeekBench သည်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ၏နောက်ထပ်အလယ်အလတ်တန်းစားဖြစ်သော Moto G6 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသပြီး၎င်းသည် Android 8.0 Oreo ကိုလည်ပတ်မှုစနစ်နှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်။ သင်ပိုမိုသိလိုပါသလား ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအသေးစိတ်ပြောပြ!
Google ၏ virtual reality ပလက်ဖောင်းသည် beta မှထွက်လာပြီးပိုများသော terminals များနှင့်သဟဇာတဖြစ်လိမ့်မည်။
Evan Blass က Xperia XZ2 နှင့် XZ2 Compact ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးသည်
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနှင့်အရေးအပါဆုံးနည်းပညာဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်များဖြစ်သည့်ဘာစီလိုနာတွင် Mobile World Congress အတွက်ရက်အနည်းငယ်သာကျန်တော့သည်။ နာမည်ကျော် filter Evan Blass သည် Sony Xperia XZ2 နှင့် XZ2 Compact အတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များစွာရှိသည်။ Sony ကဒီပြပွဲမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်အဆင့်မြင့်ဆိပ်ကမ်းနှစ်ခု။
ယခုသင်သည်စပိန်နိုင်ငံ၌ Sony Xperia XA2, XA2 Ultra နှင့် L2 ကိုရနိုင်သည်
Sony Xperia XA2, XA2 Ultra နှင့် L2 တို့ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ရောင်းရန်ရှိသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးနှစ်စီးမှာအသီးသီးအသီးသီးတွင်ယူရို ၄၂၉ နှင့် ၃၂၉ ဖြင့်အသီးသီးပြီး ၂၂၉ ယူရိုကိုအမေဇုံမှရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုယခုရယူပါ။
Huawei MediaPad M5 10 Pro - Huawei ၏တက်ဘလက် MWC 2018 သို့ရောက်ရှိသည်
Huawei MediaPad M5 10 Pro: MWC 2018. အတွက် Huawei တက်ဘလက်။ MWC 2018 သို့ရောက်ရှိမည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှဤတက်ဘလက်အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
၁၆၀၀၀ mAh ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည့် Energizer Power Max P16K Pro၊ ဘာစီလိုနာရှိ MWC တွင်ပြသမည်
Meet the Energizer Power Max P16K Pro နှင့်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူများကကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာအသုံးချနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ လျှပ်စစ်ယုန်၏ကုမ္ပဏီ၏အဆိုအရ P16K သည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်တစ်ပတ်ကျော်ကြာအသုံးပြုမည်ဟုကတိပေးခဲ့သည် ကျွန်တော်တို့ဟာ plug ကိုစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
TENAA ၏ဖော်ပြချက်များအရ Huawei FLA-AL10 နှင့် FLA-AL00 တို့၏သတ်မှတ်ချက်များဖြစ်သည်
တရုတ်အခြေစိုက်အာရှအခြေစိုက် Huawei သည် ၁၆: ၉ မျက်နှာပြင်ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုမေ့သွားပုံရသည်။ Huawei FLA-AL16 နှင့် FLA-AL9 တို့ဖြစ်သည်။ TENAA တွင်ပေါက်ကြားခဲ့သည့်ပစ္စည်းနှစ်မျိုးမှာလောင်းကြေး ၁၈ ခုရှိသည်။ 10 ရှုထောင့်အချိုး။ ငါတို့အကုန်လုံးကိုမင်းတို့ပြောပြမယ်။
၎င်းသည် Xiaomi Mi A2 ၏ဒီဇိုင်းဖြစ်နိုင်သည်
ဖြစ်နိုင်သည့် Xiaomi Mi A2 ဒီဇိုင်းကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်း၏ဒီဇိုင်းသစ်ကိုလူသိများသောယိုစိမ့်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက။
Nest Cam IQ ကင်မရာသည် Google Assistant နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်
Google's Nest ကင်မရာသည်၎င်းသည် Google Home ကဲ့သို့အသုံးပြုရန်အတွက်၎င်းသည် Google Assistant နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော update ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
မဟုတ်ပါ၊ Galaxy S9 ၏စျေးနှုန်းသည်ယူရို ၁၀၀၀ ထက်မပိုပါ
Evan Blass သည် Samsung ၏အဓိကစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များဖြစ်သော Galaxy S9 နှင့် Galaxy S9 + တို့ကိုစျေးကွက်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိရန်ထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။
Honor9Lite ကို face unlock နှင့်ပြုလုပ်ထားသည်
Honor9Lite ကို face unlock နှင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်သို့လာသည့်အင်္ဂါရပ်အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ထင်ရှားသော Huawei Honor 7C ကို၎င်း၏ထူးခြားချက်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အတူစစ်ထုတ်ခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံထုတ် TENAA မှတစ်ဆင့်စျေးကွက်သို့ရောင်းချမည့်ဖုန်းများဖြတ်သန်းသွားသည်။ အသေးစိတ်ကိုပြောပြပါ
Caterpillar သည်၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်စမတ်ဖုန်းကိုမကြာသေးမီကမှဖြန့်ချိခဲ့ပြီး၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထုတ်လုပ်ခဲ့သော S61 ၏နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သော Cat S60 ဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ရှိသမျှသည်၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုပြောပြ! အဲဒါကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
အရာအားလုံးကဒီမော်ဒယ်၏ဒုတိယမျိုးဆက်ကိုမထုတ်လုပ်မီလေးနှစ်တွင် Essential Phone သည်ဥရောပသို့ယခုနှစ်အလယ်ပိုင်းတွင်ရောက်ရှိနိုင်ကြောင်းညွှန်ပြနေသည်။
Huawei Enjoy 8 သည် TENAA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုရရှိသည်
ဘာစီလိုနာရှိ Mobile World Congress သို့ချဉ်းကပ်လာပြီဖြစ်သည်။ Huawei သည်ထိုပွဲတွင်ထုတ်လွှင့်မည့်ထုတ်ကုန်အသစ်များနှင့်အတူပါလိမ့်မည်။ သို့သော်အာရှကုမ္ပဏီသည် Huawei Enjoy 8 ကဲ့သို့သောအခြားဆိပ်ကမ်းများကိုသာအာရုံစိုက်သည်။ မိုဘိုင်းတစ်ခုက၎င်းရဲ့စရိုက်လက္ခဏာတွေကိုငါတို့သိပြီးသား။
Samsung သည် Galaxy S8 အတွက် Android Oreo update ကိုပြန်လည်စတင်
Android Oreo မှ Galaxy S8 ကို update ပြုလုပ်ပြီးနောက် ၈ ရက်အကြာတွင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည် reboots ပြfixedနာနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးဗားရှင်းအသစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ယိုစိမ့်မှုအရ၎င်းတို့သည် HTC U12 Plus ၏သတ်မှတ်ချက်များဖြစ်သည်
HTC U12 Plus သည်အဆင့်မြင့် terminal တစ်ခုဖြစ်ပြီးယခုနှစ်အလယ်ပိုင်းတွင်ရရှိနိုင်သည့်ထူးခြားချက်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ်ယိုစိမ့်မှုအရ Snapdragon 845,6/ 8GB RAM၊ ၆.၁ လက်မဖန်သားပြင်နှင့်အခြားအရာများပါရှိသည်။
Moto G6 Play သည်အခြေခံအားဖြင့်၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုဖော်ပြသည်
Moto G6 Play - စံသတ်မှတ်ချက်အသစ်တွေထဲမှာအသစ်စက်စက်သတ်မှတ်ချက်များကိုပေါက်ကြားစေခဲ့ပါတယ်။ လာမည့်သီတင်းပတ်တွင် MWC 2018 တွင်လာမည့် Motorola ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Sony Xperia ZX2 နှင့် ZX2 Compact ၏အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်
Sony Xperia XZ2 နှင့် XZ2 Compact ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဓာတ်ပုံနှင့်အတူစစ်ထုတ်သည်။
Galaxy S9 + သည် 256 GB သိုလှောင်မှုပမာဏဖြင့်ရောက်ရှိနိုင်သည်ဟုအတည်ပြုခဲ့သည်
နောက်ဆုံး Galaxy S9 နှင့်ပတ်သက်သည့်ကောလာဟလများကအနည်းဆုံးအချို့စျေးကွက်များတွင်ဒီ terminal ကို 256 GB GB ဖြင့်ဈေးကွက်သို့မည်သို့ရောက်ရှိနိုင်ကြောင်းပြသသည်။
Xiaomi ၏ဂိမ်းကစားသူအများစုအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးစမတ်ဖုန်းကို Black Shark ဟုခေါ်သော terminal ကိုမည်သို့ပုံဖော်မည်ကိုပထမ ဦး ဆုံးရိုက်ကူးလိုက်ပြီဖြစ်သည်။
တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung မှထုတ်ဝေသောထုတ်ဝေမှုအရဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်ကိုဘာစီလိုနာရှိ Mobile World Congress တွင်တွေ့မြင်ရလိမ့်မည်ဟုမတ်လ ၁၆ ရက်ကကမ္ဘာတစ်ဝန်းသို့ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အားဖော်ပြပေးသည်။
Samsung Galaxy Note 8 သည် Android 8.0 Oreo ကိုရရှိတော့မည်ဖြစ်သည်။ WiFi Alliance မှထွက်ပေါ်လာသောအချက်အလက်များအရဤကိရိယာ၏စံပြအမည်သည် operating system ၏ဤဗားရှင်းနှင့်အတူဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအသေးစိတ်ပြောပြ!
Aquaris X2 နှင့် Aquaris X2 Pro - Android One ပါသော BQ ဖုန်းအသစ်များ
Aquaris X2 နှင့် Aquaris X2 Pro - Android One ပါသော BQ ဖုန်းအသစ်များ။ မကြာမီစျေးကွက်တွင်မကြာမီရောက်ရှိတော့မည်ဖြစ်သောစပိန်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှဖုန်းနှစ်လုံးအကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာပါ။
HTC Desire 12 ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များသည်၎င်း၏သေတ္တာအရပေါက်ကြားခဲ့သည်
မကြာသေးမီက HTC Desire 12 ၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အားကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များမရှိသော်လည်းကုမ္ပဏီ၏ကက်တလောက်တွင်အလယ်အလတ် / အနိမ့်ကျသောအကွာအဝေးတစ်ခုအဖြစ်တည်ရှိမည့် terminal တစ်ခုသည်ပေါက်ကြားခဲ့သည်။ HTC U12 နှင့်ဆင်တူနိုင်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
Samsung Galaxy S9 + သည် Exynos 9810 နှင့်အတူ Geekbench တွင်ရမှတ်များခဲ့ပြီး၊ ၎င်းသည် SD845 ထက် ပို၍ စွမ်းအားကြီးသည်။
Samsung Galaxy S9 + သည် AnTuTu နှင့်အတူယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးစံနမူနာတစ်ခုဖြစ်သည့် Geekbench benchmarks ကိုခံယူခဲ့သည်။ Geekbench ၏အဆိုအရ Samsung ၏ Exynos9ရှိ Galaxy S9810 + သည် Qualcomm Snapdragon 845 ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးပိုမိုအားကောင်းသည်။ ထွက်ရှာပါ။
Xiaomi Redmi Note5၏နောက်ခံပုံများကိုရယူပါ
သင်၏စမတ်ဖုန်း၏နောက်ခံပုံများကိုပြောင်းလဲလိုပါကဤဆောင်းပါးတွင် Redmi Note 33 နှင့် Redmi Note5Pro မှထွက်လာသောနောက်ခံ ၃၃ လုံးကိုသင့်အားပြပါမည်။
Nokia 8 Pro: ကင်မရာငါးခုနှင့် Snapdragon 845 ပါဝင်သည်
Nokia 8 Pro: ကင်မရာငါးခုနှင့် Snapdragon 845 ပါ ၀ င်သည့်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်အကြောင်းယခုနှစ်တွင်စျေးကွက်တင်နိုင်လိမ့်မည်။
Xiaomi သည်၎င်း၏ပထမဆုံးစတိုးဆိုင်ကိုဘာစီလိုနာတွင်ယခုအပတ်တွင်ဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်။ MWC 2018 မတိုင်မီဘာစီလိုနာတွင်တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏စတိုးဆိုင်၏အဖွင့်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ဤရွေ့ကား Samsung Galaxy Tab S4 ကိုတက်ဘလက်၏ပေါက်ကြားသတ်မှတ်ချက်များဖြစ်ကြသည်
ထွက်ပေါ်လာတဲ့ Samsung Galaxy Tab S4 ရဲ့ Galaxy Tab S3 ရဲ့ specs တွေအားလုံးကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ။ ပေးထားတဲ့အချက်အလက်တွေအရဒီ gadget မှာရှစ် core ပရိုဆက်ဆာ၊ ၁၀.၅ လက်မမျက်နှာပြင်နဲ့ Android 10.5 Oreo တို့ပါ ၀ င်ပါတယ်။
ဘာစီလိုနာရှိ Mobile World Congress သို့ချဉ်းကပ်နေပြီ။ ကျွန်တော်တို့အတွက် Vernee မှာဘာသတင်းကောင်းရှိသလဲ။
ဘာစီလိုနာရှိ Mobile World Congress သည်ထိုအခမ်းအနားတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမည့်အသစ်အဆန်းများကိုချဉ်းကပ်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကဏ္ sector တစ်ခုချင်းစီအတွက်ထုတ်ကုန်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်လိမ့်မည်သည့်အတွက်ငါတို့အဘို့အလိုင်းများအများအပြားပြင်ဆင်သောအာရှကုမ္ပဏီ Vernee ၏ဖြစ်ရပ်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
Pixel နှင့် Pixel2တို့၏လျင်မြန်စွာအားသွင်းခြင်းသည်အလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအပူချိန်လိုအပ်သည်
ရာသီဥတုအခြေအနေများကအပူချိန် ၂၀ ဒီဂရီအောက်ရောက်သောအခါ Google Pixel2XL နှင့် Google Pixel2တို့၏မြန်ဆန်စွာအားသွင်းမှုကအကျိုးသက်ရောက်သည်။
Nubia NX606J ကို Snapdragon 845 နှင့် 6GB RAM ဖြင့် AnTuTu တွင်တွေ့နိုင်သည်။
Nubia NX606J သည်မကြာသေးမီက AnTuTu Benchmark တွင် Qualcomm Snapdragon 845 ပရိုဆက်ဆာနှင့် 6GB RAM နှင့်ပေါက်ကြားခဲ့ပြီးအခြားသတ်မှတ်ချက်များ မှလွဲ၍ ခိုင်မာသည့်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာသည်။ အဲဒါကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
အသစ်ထုတ်သော Huawei P20 Plus မှအချက်အလက်များ
Huawei P20 Plus အကြောင်းအချက်အလက်အသစ်များ မတ်လတွင်ဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိတော့မည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှအဆင့်မြင့်ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Asus Z01RD တွင် Qualcomm SD845 နှင့် 6GB RAM ပါဝင်သည်။ ZenFone5အသစ်ဖြစ်မလား။
Asus သည်အာရှကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Qualcomm Snapdragon 845 ကိုသူတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Processor အဖြစ်ရွေးချယ်သည့်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူများစာရင်းတွင်ပါဝင်လိုသည်။ အခြားအကျိုးကျေးဇူးများအပြင် AnTuTu တွင်ယခု SoC နှင့် 01GB RAM နှင့်အတူစစ်ထုတ်ပြီးသော Asus Z6RD မိုဘိုင်းနှင့်လည်းထိုကဲ့သို့ဖြစ်ပျက်မည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် Samsung မိုဘိုင်း၏တေးသံသစ်ကိုရှာဖွေပါ
Samsung သည် ၂၀၁၈ တွင်သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက်တေးသီချင်းအသစ်ကိုတင်ဆက်သည်။ ဒီနှစ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုယခုနှစ်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သော Over The Horizon ၏မူကွဲအသစ်ကိုရှာဖွေပါ။
Galaxy S9 နှင့် S9 + တို့၏စျေးနှုန်းကိုပြန်လည်စစ်ထုတ်သည်
သင့်အနေနဲ့ Galaxy S9 နဲ့ S9 + ရဲ့ဖြစ်နိုင်သမျှစျေးနှုန်းအသေးစိတ်ကိုပြောပြပါမယ်
Nokia4သည် FCC အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုရရှိထားပြီးဖြစ်သည်
Nokia4သည် FCC အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ မကြာမီစျေးကွက်သို့ရောက်ရှိတော့မည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi Mi Mix 2s ၏ပထမဆုံးဗီဒီယိုကိုစစ်ထုတ်သည်။ ၎င်းသည် Xiaomi Mi Mix ၏တတိယမျိုးဆက်ဖြစ်လိမ့်မည်
BlackBerry Motion ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ရနိုင်သည်
BlackBerry ၏အလယ်အလတ်တန်းစားနေရာတွင်အစားထိုးဖြစ်လာရန်ကြိုးပမ်းမှုအား BlackBerry Motion ဟုခေါ်သည်၊ ၎င်းကိုစပိန်တွင်ရရှိနိုင်ပြီးဖြစ်သည်
Samsung Galaxy J4 သည်မကြာသေးမီက GeekBench benchmark သို့ထွက်လာပြီး၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အချို့သောအလယ်အလတ်တန်းစားအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိခဲ့သည်။ ရှာတွေ့သည်!
Samsung က Galaxy S8 အတွက် Oreo update ကိုရုပ်သိမ်းခြင်း၏အကြောင်းပြချက်အကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်
Galaxy S8 အတွက် Android Oreo update ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ခြင်းသည်၎င်းကိုတပ်ဆင်ထားသည့်ကိရိယာများပြန်ဖွင့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံး Huawei P20 Lite ၏ပုံရိပ်များပေါက်ကြား
ကျွန်ုပ်တို့သည် Huawei P20 Lite ၏ပထမဆုံးအစစ်အမှန်ပုံရိပ်များကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြပေးပါသည်
Xiaomi Mi6ကို Unboxing လုပ်ခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြည်ချခြင်းနှင့်အမြင့်ဆုံး Android အကွာအဝေးအတွင်းအလွန်ကောင်းမွန်သော ၀ ယ်ယူမှုရွေးချယ်စရာဖြစ်နိုင်သည်။
စမတ်နာရီများအတွက် Android လည်ပတ်မှုစနစ်အသစ်သည်ထုတ်ကုန်အသစ် ၅ ခုသို့ရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုဂူဂဲလ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်မွမ်းမံထားသောစာရင်းအရသိရသည်။
Essential Phone သည်အရောင်အသစ်ဖြင့်ကန့်သတ်ထားသောထုတ်ဝေမှုကိုစတင်ခဲ့သည်။ စျေးကွက်သို့အရောင်သစ်များရောက်ရှိလာသည့်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်း၏ကန့်သတ်ထားသောထုတ်ဝေမှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi Mi Mix 2S၊ ရှစ် core Qualcomm Snapdragon 845 ပရိုဆက်ဆာ၊ 8GB ​​RAM၊ 256GB ROM နှင့်အခြားစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော Android ဖုန်းများကိုပါ ၀ င်မည့် Xiaomi Mi Mix XNUMXS terminal အကြောင်းပိုမိုသိထားပြီးဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အရာအားလုံးရဲ့အကောင်းဆုံးကဒါဟာအစစ်အမှန်ဖြစ်ပါတယ်! ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
NOMU S50 Series - ၁၈: ၉ မျက်နှာပြင်နှင့် Android 18 Oreo ပါသည့်ပထမဆုံးကြမ်းတမ်းသောစမတ်ဖုန်း။ MWC9သို့ရောက်ရှိမည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ထုတ်ကုန်အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Moto G6 ၏ပထမဆုံးသတ်မှတ်ချက်များကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
Moto G6 - ဖုန်းရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များနဲ့ပေါက်ကြားထားတဲ့ဓာတ်ပုံများ။ Motorola ဖုန်းအသစ်မှရရှိသောပထမဆုံးသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဓာတ်ပုံများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi ကိုထိန်းချုပ်ရန် OnePlus မကောင်းသောပြောင်းရွှေ့မှုရှိသည်
OnePlus သည်အာရှကုမ္ပဏီတခုမှပြုလုပ်သောစစ်တမ်းကောက်ယူမှုတွင်၎င်း၏ဆိပ်ကမ်းများ၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်များကိုကြည့်ရှုရန်ပျက်ကွက်ပြီးနောက် Xiaomi ကိုထိန်းချုပ်ရန်လိုသည်။
Nokia 7+ - Nokia ရဲ့ပထမဆုံး Android One ဖုန်းရဲ့ပုံရိပ်တွေထွက်ပေါ်လာသည်
Nokia 7+: အမှတ်တံဆိပ်၏ပထမဆုံး Android One ဖုန်းကိုပေါက်ကြားခဲ့သည်။ MWC 2018 တွင်ပြသမည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
TENAA တွင် Hisense HLTE212T ကိုပထမဆုံးအကြိမ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်
Hisense HLTE212T ကို TENAA တွင်ပြသခဲ့ပြီး၊ ၎င်း၏ဒေတာဘေ့စ်အရ၎င်းကိရိယာသည်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အလယ်အလတ်ပိုင်း / အနိမ့်အကွာအဝေးများဖြစ်သော 3GB RAM၊ ၁.၄၀GHz quadcore SoC တို့နှင့်အတူပါ ၀ င်သည်။ အဲဒါကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
Samsung Galaxy S9 ၏ပထမဆုံးတရားဝင်ဗီဒီယိုများထုတ်ဝေ ကိုရီးယားကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှအဆင့်မြင့်ဖုန်းအသစ်အကြောင်းဤဗီဒီယိုများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
အာရှကုမ္ပဏီ Asus တွင်၎င်း၏ Go version တွင် Android 8.1 Oreo ပါ ၀ င်သော terminal နှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် low-end မိုဘိုင်း၏ပုံမှန်လက္ခဏာများရှိသည်ဟု GeekBench မှပေါက်ကြားမှုအရသိရသည်။ ရှာတွေ့သည်!
Galaxy S9 နှင့် S9 + တို့ကိုပွဲထုတ်မည့်အရာနှစ်ခုသည် animated emojis နှင့် stereo speakers system ဖြစ်သည်။
Xiaomi Redmi Note5နှင့်5Pro တို့သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။
Xiaomi Redmi Note5နှင့်5Pro: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ ဒီနေ့အိန္ဒိယမှာတင်ထားတဲ့ Xiaomi ဖုန်းနှစ်မျိုးအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
AnTuTu က Sony H8266၊ Qualcomm Snapdragon 845 SoC နှင့် 4GB RAM ရှိတဲ့မိုဘိုင်း
မကြာသေးမီက AnTuTu တွင် Sony H8266၊ ၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များအချို့ပေါက်ကြားခဲ့သည့်တယ်လီဖုန်းသည်အာရှကုမ္ပဏီကြီး၏ကတ်တလောက်တွင်အမြင့်ဆုံးအဆင့်သို့ရောက်သွားသည်ကိုပြသသည်။ Snapdragon 845, 4GB RAM နှင့် Android 8.0 Oreo တို့နှင့်အတူကတိက ၀ တ်များ။
Essential Phone သည်ခြောက်လအတွင်း ၈၈,၀၀၀ ယူနစ်ရောင်းချခဲ့သည်
Essential Phone သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၈၈,၀၀၀ စီးသာရောင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် Essential ဖုန်း၏ရောင်းအားနည်းပါးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Android P သည် notch နှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်
နောက်ထပ် Android P version ကိုနောက်ဆုံးတွင် Android ထုတ်လုပ်သူများအကြားရေပန်းစားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည့် notch ကိုအထောက်အပံ့ပေးလိမ့်မည်။
Xiaomi သည်လက်ရှိအချိန်တွင်ဂိမ်းစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုလုပ်ဆောင်နေသည်။ ၎င်း၏ပထမ ဦး ဆုံးဂိမ်းစမတ်ဖုန်းတွင်အလုပ်လုပ်သောကုမ္ပဏီ၏အစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei P20 ၏ပထမပုံရိပ်သည်နယ်ခြားမဖြတ်ဘဲ notch နှင့်အတူစစ်ထုတ်သည်
Huawei P20 ကိုတင်ဆက်မည့်ရက်မတိုင်မီတစ်လအလိုတွင်၎င်းသည်နောက်ထပ် Huawei ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမည်သို့ပြသမည်ကိုပြသထားသည့်ပုံတစ်ပုံပေါက်နေသည်။
Xiaomi Redmi Note5သည်၎င်း၏တင်ဆက်မှုမတိုင်မီပေါက်ကြားခဲ့သည်
Xiaomi Redmi Note ၏ပထမ ဦး ဆုံးပုံရိပ်များကိုစစ်ထုတ်သည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်မတိုင်မီစစ်ထုတ်သည့်ဖုန်း၏ဒီဇိုင်းကိုရှာဖွေပါ။
Sony Xperia XZ2 Pro: ၁၈: ၉ မျက်နှာပြင်ပါသောပထမဆုံး Sony ၏ Benchmark ကိုပေါက်ကြားခဲ့သည်
Sony Xperia XZ2 Pro: ၁၈: ၉ မျက်နှာပြင်ပါသောပထမဆုံးဆိုနီ၏စံနှုန်း။ ဒီဇိုင်းအသစ်အတွက်လောင်းမည့် Sony ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များနှင့် ZTE Axon9ပုံများ
ZTE ၏နောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Axon9သည်ယခုနှစ်အလယ်ပိုင်းအထိဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်မည်မဟုတ်သော်လည်းပထမဆုံးပုံရိပ်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
9 GB RAM ပ�